Fantaro Ny Zavamisy : Ny #LeyTelecom ao Meksika (Lalànan’ny fifandraisandavitra) · Global Voices teny Malagasy
Mifanohitra mivantana amin'ireo Fotokevitra 13-n'ny Fanarahamaso ny Zon'olombelona sy Fifandraisandavitra
Voadika ny 16 Mey 2019 12:59 GMT
Tao amin'ny leftwardthinking.com ny dika voalohany nipoiran'ity lahatsoratra ity.
Ny 24 martsa 2014, nampahafantatra ny Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Lalànan'ny Fifandraisandavitra sy ny Fampitambaovao) ny filoha Meksikana Enrique Peña Nieto, volavolan-dalàna izay hanova tanteraka ny fifandanjam-pahefana eo amin'ny aterineto sy ny fifandraisandavitra ao Meksika . Nilaza ireo mpitsikera avy amin'ny fomba fijery ara-politika maro fa hampitombo ny fahefan'ny fanjakana ilay lalàna ary hametra ny fahafahan'ireo orinasam-pifandraisandavitra hanao sivana, hanao fanarahamaso ary hanao fanavakavahana amin'ny tambajotrany avy.
Ny volana Martsa 2013, nanaiky fanangonantsonia niaraka tamin'ny sonia maherin'ny 200.000 ny Antenimieran-doholona Meksikana izay manohana tolodalàna iray novolavolaina hiantoka ny zon'ny Meksikana hiditra anaty aterineto. Hevitra mikasika ny zon'ny vahoaka hahazo vaovao sy ny maha-zava-dehibe ireo toerana ahazoan'ny rehetra izany, toy ny tranomboky sy ny sekoly, no voaresaka tamin'ilay fanangonan-tsonia. Kanefa, tsy manome zo toy izany ilay volavolan-dalàna #LeyTelecom. Vao mainka aza mametraka io raharaha io ho toy ny iray amin'ireo tombontsoa ara-barotra sy tombontsoa ara-toekarena ho an'ny orinasam-pifandraisandavitra ilay izy.
Didian'ilay volavolan-dalàna ireo orinasam-pifandraisandavitra hitazona ny angon-drakitry ny mpanjifa sy hanome torohay ara-potoana (ao anatin'izany ny angon-drakitra GPS) ho an'ireo masoivoho federaly misahana ny filaminana, na an'ireo tomponandraikitra ambony izay omena fahefana . Ity fizaràna iray ao amin'ny lalàna ity dia miasa tanteraka ivelan'ny rafi-pitsarana, ka tsy mitaky fahazoandalàna na didim-pitsarana hahafahana maka izany angon-drakitra izany akory. Tsy hita ao anatin'ilay lalàna ireo fepetra takiana amin'ny fomba tokony hiarovana na hampiasaina angon-drakitra manokan'ny olona iray rehefa eo ampelatanan'ny manampahefana. Mifanohitra mivantana amin'ireo Fotokevitra 13 momba ny Fanarahamaso ny Zon'olombelona sy ny Fifandraisana ireo singa ao anatin'ilay lalàna,.
Farany, avelan'ity volavolan-dalàna ity mazava ireo orinasam-pifandraisandavitra hanolotra karazana tolotra raitra, haingana, ary fidirana araka izay tian'izy ireo. Tsy azo ihodivirana fa hitondra any amin'ny fanitsakitsahana ny satan'ny tsy fiandanian'ny Aterneto ireo fomba fanao ireo izay mametra ny aterineto ho toy ny rafitra mampiasa tariby manao ambaratongany hahatonga ny mpanjifany handoa vola samy hafa mba hidirana aminà karazana vohikala isankarazany ary tsy maintsy handoa vola amin'ireo orinasam-pifandraisandavitra ireo tolotra tadiavin'ny maro (tahaka ny Facebook, youtube sns) mba ahazoana ireo mpanjifa mpampiasa fifandraisandavitra.
An'aliny ireo Meksikana nihetsika nanohitra ny fandaniana ilay volavolan-dalàna hatramin'ny fotoana nampahafantarana ilay izy. Notarihan'ireo vondrona toy ny ContingenteMX sy # YoSoy132, andro maromaro hanaovana hetsika no nomanina hanairana ny sain'ny olona sy hampiatoana tanteraka ilay volavolan-dalàna. Natao tao anaty aterineto sy teny an-kianja ilay tolona. Namporisihina mihitsy ny olona manerana izao tontolo izao hanery ny governemanta Meksikana tsy handany ity volavolan-dalàna ity. Mety hampidi-doza ny ho tohin'ilay #LeyTelecom — ary ny fandrahonana ny fahalalahan'ny aterineto any amin'ny toerana hafa dia midika ho fandrahonana ny fahafahan'ny Aterineto na aiza na aiza.
Inona no mitranga ao Meksika ? [LAHATSARY] [ang] – Fiharatsian'ny zava-misy ao (Anglisy). vohikala niaingan'ny resaka voalohany miaraka amin'izay momba ilay lahatsary [esp]
Libre Internet Para Todos [esp] – Ny zo nomerika rehetra : fanazavana ho an'ireo vao manomboka, fanazavana an-tsary mahafinaritra, ary ny maro hafa
ContigenteMX – Famintinana tsara momba ny fanoherana ilay volavolan-dalàna, miaraka amin'ny loharanom-baovao fanampiny. Jereo koa ny fanambarna an-gazerty nataon'ny ContigenteMX tamin'ny 21 Aprily ary ny taratasin'izy ireo ho an'ny Kongresy (miaraka amin'ireo mpanao sonia avy amin'izao tontolo izao).
Es momento de #DefenderInternet [LAHATSARY] [esp] – Resadresaka niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany an-toerana tao Meksika.
# NoMásPoderAlPoder [VIDEO] [esp] – horonantsary mitantara ilay hetsi-panoherana
Tanànan'i Mexico : Nidina an-dalambe manohitra ny #LeyTelecom ny mponina [esp, ang] – Tatitra nataon'ny Advox tamin'ny fihetsiketsehana ny 10 Aprily
#EPNStop: Olona mifandray tanana tao Meksika manohitra ny #LeyTelecom [esp, ang] – nizara lahatsoratra ny Global Voices mikasika ny “fifandraisan-tanana” hetsi-panoherana tao amin'ny Tananan'i Meksiko.
*Nivoaka voalohany tao amin'ny Leftward Thinking – Ny Ady ho an'ny Derechos Digitales & ny Fahalalahan'ny Aterineto ao Meksiko ny loharano tsy miankina iray, tsy navoaka an'ity lahatsoratra ity.